Driver | Shwe Taung Por Group of Companies Limited. ﻿
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံ3းနှစ်ရှိရမည်။
•	ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး အရက် ၊ဆေးလိပ်ကင်းသူ ဖြစ်ရမည်။
•	ရန်ကုန် ၊ နယ်ကျွမ်းကျင်ရမည်။
•	လိုင်စင် (နီ၊ညို)ဖြစ်ရမည်။
Driver Driver, Security & Cleaning jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Shwe Taung Por Group of Companies Limited. Driver, Security & Cleaning jobs Driver, Security & Cleaning jobs Driver Jobs in Myanmar, jobs in Yangon